Nke a ga-abụ atụmatụ nke LG G6 ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Nke a ga-abụ atụmatụ nke LG G6 ọhụrụ
Afọ 2016 na-abịa na njedebe na ndị niile na-arụpụta ngwaọrụ mkpanaka na-elebanye anya na 2017 dị ka afọ nke ha ga-ebuputa ọkọlọtọ ha azụ na ahịa nke ha na-anwa ịlaghachi ịbụ ndị na-achị. Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịgbachi afọ a ozugbo o kwere omume bụ LG, nke na-emezughị nke ọma ya LG G5, n’agbanyeghi na o nwere ihe nile ma obu ihe obula ime ya.
Companylọ ọrụ South Korea nọ na-arụsi ọrụ ike na LG G6, bụ nke sitere na ya mepụtara atụmatụ ya n'ime awa ndị na-adịbeghị anya, nakwa na ọ nwere ike iru ahịa n'oge na-adịghị anya, iji gbalịa ịtụle usoro ụlọ ọrụ niile, ọkachasị Samsung Galaxy S8.
Nzube nke ọhụụ LG ọhụrụ ga-adị ka nke LG G5, ọ bụ ezie na amabeghị ya ma ọ ga-aga n'ihu na-adị modular ma ọ bụ na ọ ga-abụ ọnụ na-enweghị ike ịgbanwee modulu nke batrị enweghị ike ịbụ wepụrụ Resultshụ nsonaazụ ahịa adịghị mma nke LG G5 nwere, ọ ga-eche na ụlọ ọrụ South Korea na-atụfu echiche nke modulu.
O doro anya na ẹdụk image na atụmatụ nke LG G6, anyị pụrụ ịhụ na ọ ga-abụ a obere ihe premiere karịa ya ụzọ na ikekwe nakwa ihe thinner. N'ebe a, anyị na-egosi gị onyonyo enyochara;
Banyere njirimara na nkọwapụta, n'oge anyị maara obere ozi, ọ bụ ezie na a nụlarị ya na anyị nwere ike ịnwe ọnụ na ihuenyo 5.5 nke anụ ọhịa nwere mkpebi QHD, Snapdragon 821 ma ọ bụ 830 processor yana 6GB RAM. Igwefoto ga-abuo abuo na nke onye etinyere na LG V20.
Ì chere na LG ga-eju anyị anya na LG G6 na-esote?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nke a ga-abụ atụmatụ nke LG G6 ọhụrụ
China ga egosiputa ihe di n’elu onwa n’ime 2018